Dad Oroma ah oo lagu dilay gudaha dalka Jabuuti – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDad Oroma ah oo lagu dilay gudaha dalka Jabuuti
Dad Oroma ah oo lagu dilay gudaha dalka Jabuuti
Hiiraan Xog, Ugu yaraan Lix ruux oo Itoobiyaan ayaa Saacaddihii lasoo dhaafay lagu dilay gudaha dalka Jabuuti sidda ay xaqiijisay Warbaahinta dalka Itoobiya.
Dadka dhintay oo Oromo u badan ayaa waxaa dilay Kooxo ka careysan dad Jabuutiyaan oo dhawaan lagu dilay Magaalada Diridhaba ee dowlad degaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya.
Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale sheegtay in la bililiqeystay dukuumo ay leeyihiin dadka Oromadda ah oo ku yaalla dalka gudaha dalka Jabuuti.
Falkaan ayaa cabsi weyn ku abuuray boqolaal qof oo Itoobiyaan oo kunool gudaha dalka Jabuuti.
Ciidamada Booliska dalka Jabuuti ayaa xiray qaar ka mid ah dadkii falkaasi geystay, waxaana dowladda ay iska xilsaartay ilaalinta dadka Itoobiyaan ah sidda uu sheegay Sarkaal u hadlay Booliska dalka Jabuuti.
Maamulka Puntland oo ka hadlay wadahadaladii degaanka Tuka-raq